Walaal ila Tali waxaa i qaba nin aad u wanaagsan lakiin laba Arim ayaan ka celin waayay | Gaaloos.com
Home » galmada » Walaal ila Tali waxaa i qaba nin aad u wanaagsan lakiin laba Arim ayaan ka celin waayay
Walaal ila Tali waxaa i qaba nin aad u wanaagsan lakiin laba Arim ayaan ka celin waayay
Aqrsite, waxaan halkan kuugu soo gudbineynaa dhambaal ka yimid aqriste kale oo idinka doonaya talo, waa barnaamijkeeni cusbaa ee aan ugu magac darnay ILA TALI AQRISTE: Ujeedka ayaa ah qofkii talo raba inuu soo weydiisto aqristayaasha aan u fududeyno, maadamaa uu heli karo fikrado badan oo kal duwan, mark a la isku geeyana noqon kara wax ku ool.
Waxaan idin ka codsaneynaa inaad aqrisaan farriintan, kadibna wixii talo ah oo wanaagsan oo aad si daacad iyo qalbi furnaan ah ugudarsataan, adinka oo hab qoraalkiina ka ilaalinaya qaladadaaka ama Tape error-ka, si qofka talada ku socoto uu fahamkiisa ugu fududaado. Waxaad taladaada ku qori kartaa qeybta comments-ka.
Talo doonkeena maanta waa gabar magaceeda kusoo koobtay Sucaad, oo aan inoo sheegin halka ay joogto.
Waxayna qoraalkeeda ku billwoday sidan:-
“Magacayga Waa Sucaad
Walaalayaal talo waa tii ilaah laakin tallo ayaan idinka rabaa.
Waxaan ahay inan Soomaaliyeed waxaan guursaday nin iga weyn. Markii aan baranayey waxaan ku arkay inuu yahay muqayil yacni sigaar iyo jaad ayuu isticmaalaa. Waa nin shaqaysta, maalintii ilaa 2:30pm wuxuu ku maqan yahay shaqo markuu guriga yimaado wuu qadeeyaa, isla markii uu qadeeyo wuxuu aadaa magaalada iyo jaad. Habeenkii wuxuu yimaadaa 10:30 pm markuu soo galo wuxuu qaataa computer-kiisa fadhiga ayuu fariistaa ilaa 02:00am midnight, markaas ayuu haddana laptopkiisa qaataa oo jiifka soo galaa oo seexdaa waxa uuna ku mashquula akhrinta arimaha bulshada ee webkasirhufan.com lagu soo dabaco.
Halkaan Hoose Riix Kadib Daawo Muqaalka
Title: Walaal ila Tali waxaa i qaba nin aad u wanaagsan lakiin laba Arim ayaan ka celin waayay
Posted by galmada Net, Published at 5:27 PM and have 0 comments